Mananika ny arivo ireo nifindran’ny « Covid-19 » • AoRaha
Niampy valo ambin’ny folo ny olona mitondra ny tsimok’aretina « Covid-19 », araka ny tatitra avy amin’ny Ivon-toeram-pibaikoana momba ny Covid-19 (CCO) Ivato, omaly. Iray ihany no sitrana ary mijanona ho sivy ny isan’ireo marary ao anatin’ny fahasarotana. Efa dimy amby fitopolo sy sivinjato amin’izao fotoana izao ny fitambaran’ireo voamarina fa nahitana ny tsimok’aretina teto Madagasikara tao anatin’izay telo volana latsaka izay.
« Laboratoara efatra no nanao ny fitiliana miisa valo amby telopolo sy telonjato ary nahitana an’ireo tranga vaovao ireo. Fito tany Toamasina, dimy teto Antananarivo, telo tany Taolagnaro ary tany Mitsinjo Toliara ny telo farany. Olona notsaboina tao amin’ny hopitaly Befelatanana kosa ilay sitrana. Enina ireo marary mafy tsaboina any amin’ny hopitaly Morafeno Toamasina. Ny telo eny amin’ny hopitaly Befelatanana. Mijanona fito ireo namoy ny ainy », hoy ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra tenin’ny CCO.
Nohamafisiny fa misy ny fitaovana andraisana an-tanana an’ireo marary mafy ireo ary tsy voatery hamoy ny ainy avokoa izay olona misedra fahasarotana avy amin’ny tsimok’aretina « Covid-19 ». Ny fahavoazan’ny taovampisefoana no tena mitarika amin’ny fahafatesana.
Marihina fa efa avy amin’ ny fifampikasohana avokoa ny fito ambin’ny folo sy sivinjato amin’ireo trangana « Covid19 » eto Madagasikara ireo. Valo amby dimampolo ireo olona voan’ny valanaretina, ka nandeha fiaramanidina sy nigadona teto amintsika.
Fanitsiana teti-bolam-panjakana :: Nadinin’ny Filoha tsirairay ireo minisitra
Fifindran-toerana an-tsokosoko :: Mitohy ny fitsoahan’ireo andian’ olona ny valanaretina coronavirus